Xildhibaan Fiqi “Waan baaraynayaa shirqoolada lagu soo eedeeyey safiirka Qatar” (dhegayso) – Radio Daljir
Luulyo 24, 2019 8:23 b 0
Xildhibaan Maxamed Macalin Fiqi oo katirsan guddiga difaaca ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay inay baaraayaan wararka sheegaya safiirka Qatar ee Soomaaliya inuu ku lug leeyahay weeraro kadhacay gudaha Soomaaliya oo ay masuuliyadiisu ay sheegatay Al-shabaab.
Isagoo kula hadlayay warbaahinta magaalada Muqdisho ayaa waxaa uu sheegay guddigooda difaaca inay qabsanayaan shaqooyinka loo igmaday, ayna baaritaan ku samayn doonaan, waxaana uu sheegay maalin walba Muqdisho inay ka dhacaan weeraro argagaxiso oo dad badan ay ku geeriyoodaan.
Jariiradda NY Times ayaa sheegtay inay hayso cod muujinaya ku lug lahaashiyaha Qatar ee weerarkii kadhacay maxkamadda Bosaso bishii May, sidoo kalle madaxwaynaha Puntland ayaa ka codsaday baarlamaanka Soomaaliya inay soo baaraan eedaymahan.
Loolanka dalalka Khaliijka ayaa saamayn ku yeeshay siyaasadda guud ee Soomaaliya iyadoo dowladda faderaalka lagu eedeeyey inay taageertay dowladda Qatar.
Suxufi Cabdirashiid Geelle: “Dowladda Federaalku waxay u wareegtay shacabka iyo Puntland in la iska horkeeno”